Ogaden News Agency (ONA) – Erdogan oo Markale Ku Guulaystay Doorashadii Madaxtinimada.
Erdogan oo Markale Ku Guulaystay Doorashadii Madaxtinimada.
Posted by ONA Admin	/ June 26, 2018
Tayyib Erdogan, Madaxwaynaha Turkiga iyo xisbigiisa ayaa guul weyn ka gaadhay doorashadii guud ee Axadii ka dhacday dalkaasi oo markii ugu horaysay shacabka halmar u codeeyeen Madaxweynaha iyo Baarlamaanka cusub.
Doorashadan oo horey loo qorsheeyey inay dhacdo dhamaadka sanadka danbe ayaa waxaa soo hormariyey Madaxweyne Erdogan oo sheegay in arrintan lagu xasilinayo siyaasada iyo Dhaqaalaha dalkaasi. Shacabka Turkiga ayaa markii ugu horeysay u codeeyey Madaxweynaha kadib aftidii Dastuurka cusub loo qaaday ee awooda dowlada hoos geenaya xafiiska Madaxweynaha.
Natiijada cododka latiriyey ayaa sheegaya in xisbiga AKP ee talada haya uu helay in ka badan 43% kuraasta Baarlamaanka, halka doorashada Madaxweynaha uu Erdogan helay in ka badan 52% cododka.
Mucaaridka ayaa doonayey in ay kala dagaalamaan Erdogan inuusan heli 50% cododka si doorashadu wareeg 2aad ugu gudubto, balse arrintan ayey ku fashileen kadib markii Erdogan uu helay codod ku filan wareegii 1aad.
Madaxweyne Erdogan oo kula hadlayey taageerayaashiisa magaalada Istanbul ayaa sheegay in guushan ay usoo hooyatay dhamaan shacabka Turkiga, isagoo sheegay inuu doonayo in dalka Turkiga ka dhigo mid kamid ah 10ka dal ee dunnida ugu horumarsan.